Paompy slurry, Impeller pump pump slurry, Sleeve Shaft - Winclan
Shijiazhuang Winclan Machinary Equipment Co., Ltd.Ny vokatra lehibe amoinay dia misy paompy isan-karazany. Ny paompinay dia be mpampiasa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fitrandrahana, arintany, toby famokarana herinaratra, solika, akora simika, fitsaboana ny rano maloto, karazana tetikasa fitahirizana rano, fanondrahana fambolena, fananganana sns. Mandritra izany fotoana izany, tafiditra ao anatin'ny valves koa izahay, mifehy fanombohana sy faritra amin'ny paompy. Miaraka amin'ny karazany maro, kalitao tsara, vidiny mirary ary endrika am-bolo, ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny solika, simika, fanafody ary indostria hafa.
Io dia tohanan'ny ekipa teknika matanjaka sy ny injenieran'ny fampiharana sy ny famolavolana drafitra.
Mirehareha amin'ny fanolorana traikefa azo antoka tsy misy tambiny miaraka amina ekipa mpivarotra natokana izahay hiantohana fa hahazo ny serivisy tsara indrindra ny mpanjifa rehetra.
Ny mari-pahaizana ISO 9001: 2008 dia miantoka ny fandefasana amin'ny takian'ny mpanjifa tsy an-kanavaka.
Takelaka vita amin'ny pump pump slurry-032
Takelaka fonosana fonosana
Paompy maloto any anaty rano YW
Paompy rendrika YZ
PUMP CENTRIFUGAL TSY AZO ATAO NY RANO
Misy rivotra ao anaty vavahady ary paompy (1) misy mpampiasa sasany tsy mameno rano alohan'ny hanombohan'ny paompy; indraindray ny rano izay toa niboiboika avy tao anaty lavaka vent, nefa tsy nampody ny rivotra paompy ho reraka tanteraka, namela rivotra kely mbola ao anaty fantsona fidirana na paompy Ny (2) wi ...
SORATRA FITORIANA NY PILE FOTOTRA NY PILE
Ahoana ny famoahana ny fotaka miasa ao amin'ny antontam-bondrona mankaleo? Olana sarotra amin'ny fananganana fantsona fandavahana ity. Ny fandaharam-pitsaboana nentim-paharazana fandavahana sy fantsom-boaloboka dia: amin'ny dingan'ny fandavahana ny fampiasana sieve, fotaka ao anaty vatokely kely, fasika ary ireo potika marimaritra hafa ho an'ny fisarahana, pil ...
ANTONY ANALYISA NY TSY FAHAMARINAN'NY VOAFITRA MOMBA NY PUMP CENTRIFUGAL
Ny fanidiana paompy centrifugal dia vokatry ny tsy fahombiazan'ny tombo-kase mekanika. Ny tsy fahombiazan'ny ankamaroan'ny famoahana, ny antony mahatonga an'ity famoahana manaraka ity: